Iinqwelomoya ngexabiso eliphantsi, thenga amatikiti ngexabiso elifanelekileyo! ?
Fumana Amaxabiso aphezulu kwiinqwelomoya kunye nazo zonke iziqinisekiso enkosi kwiinjini zethu zokukhangela ezinamaxabiso aphantsi.
Ukukhangela kweenqwelo moya ngexabiso eliphantsi
Kodwa kukho ezinye iindlela kwi-Intanethi, ke sikunika ukufikelela kuphando oluphambili lwenqwelomoya kunye neewebhusayithi zokuthelekisa
I-Destinia: Enkosi kule injini yokukhangela sinokufumana iinqwelomoya ngexabiso elifanelekileyo kunye nesiqinisekiso esipheleleyo. Cofa apha
RumboInjini yokukhangela edumileyo ikwabonelela ngesixhobo sokufumana iinqwelomoya ezingabizi kakhulu. Cofa apha.
Skyscanner: Enye yeenjini ezisetyenzisiweyo kunye neyona ndlela ifanelekileyo yokufumana amaxabiso aphantsi. Ukuba ufuna ukubona ukuba isebenza njani kufuneka uyenze Cofa apha.
Lufthansa, I-airline yaseJamani kwaye yeyiphi enkulu eYurophu. Kwiwebhusayithi yayo unokufumana iindiza ezihamba phambili ngaphakathi kwesona sibonelelo sikhulu. Cofa apha.
Iiphupha, yenye yeearhente ezinkulu zokuhamba emhlabeni kwaye ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokuhamba ngenqwelomoya ngamaxabiso aphezulu. Bhukisha inqwelo moya yakho kunye nabo ukungena apha.
Nanini na xa iintsuku zokuphumla okanye zekhefu zisondela, kuye kuthi kuthi ukuphuma kwinkqubo yesiqhelo. Yeyiphi indlela ebhetele kunokwazi ezinye iindawo. Ukuba iminyaka emininzi eyadlulayo besisonqena, kuba kufuneka sithathe uhambo olude lweentsuku ezininzi, namhlanje ayenzeki loo nto. Enkosi ngenqwelomoya, siya kuba sifikile apho siya khona kungekudala. Ukuba kolu loncedo lukhulu sidibanisa ngeenqwelo eziphantsi esinokuyifumana kwiwebhu, siza kuba nenxalenye yeeholide zethu ezilungelelanisiweyo.
Iingcebiso eziphezulu zokufumana iinqwelomoya ezinamaxabiso aphantsi
Yiba bhetyebhetye: Enye yezona ndlela zibalaseleyo xa kufikwa ekufumaneni izivumelwano zokuhamba ngenqwelomoya, kuxa singaphawuli umhla othile. Oko kukuthi, sonke siyazi ukuba ixesha eliphakamileyo lihambelana nenyanga ka-Agasti kunye neeholide zesizwe. Ke ngoko, ukuba unethamsanqa ngokwaneleyo ukuba ungabaleka ngaphandle kwabo, ngokuqinisekileyo uza kugcina ngaphezulu kunokuba ucinga kwitikiti lendiza.
Amatikiti ngokwahlukeneyo: Ngamaxesha athile, bhukisha itikiti Ukuya nokubuya akusiso isisombululo sisiso. Siza kuyifumana imali esiyigcinileyo xa sigcina amatikiti ngokwahlukeneyo. Ewe kunjalo, okokuqala kuya kufuneka ujonge ngokusondeleyo, kuba ayizizo zonke iinkampani ezineli qhinga.
Izikali: Nangona i Ukuma kwiihambo Banokuba sisiphazamiso esikhulu, kule meko, banokuba lusindiso kuthi. Kungenxa yokuba ixabiso layo liyancitshiswa kakhulu.
IiyureNgaphandle kwamathandabuzo, iiyure zinokuchaphazela nepokotho yethu. Ukuba awungxami ngenxa yosuku oluthile, ngokuqinisekileyo elo xesha aliyi kuba ngumqobo nakuwe. Ke, unokuyigcina eyakho Iinqwelomoya ezinendleko eziphantsi ukuba ukhetha into yokuqala ekuseni okanye ebusuku. Ngamanye amaxesha kuyenzeka ukuba amaxabiso asezantsi kancinci. Kufuneka ujonge nje!
NgoJanuwari, ngoFebruwari nangoNovemba babe ngu- zitshiphu iinyanga zokuhamba. Ke, unokuhlala ujonga kwiintsuku zabo kwaye wenze ukubhukisha ngelo xesha. Ewe, ukuba uneentsuku zokuphumla, ungasoloko uguqula kancinci iholide onayo engqondweni.
Ungayibhukisha njani inqwelomoya kwi-Intanethi
Bhukisha inqwelomoya kwi-intanethi, Ngomnye wemisebenzi wonke umntu anokuyenza, ngaphandle kokufumana ulwazi oluninzi nge-intanethi. Ukongeza, ungagcina abalamli, ukulinda kunye nezinye iinkqubo. Ngaba awucingi ukuba kufanelekile?
Okokuqala, okona kulungileyo esinokukwenza kukuya a umkhangeli wenqwelomoya njengala sikushiye ekuqaleni kweli nqaku. Apho sinokukhetha zombini umhla kunye nendawo esifuna ukuyindwendwela kwaye siza kufumana uthotho lwezinto ezinokukhethwa, ezi-odolwe ngamaxabiso azo kunye neenkampani zeenqwelomoya. Umsebenzi olula kakhulu esiya kuba nawo phambi kwethu kwinto yemizuzwana.
Njengeenjini zokukhangela ungazisebenzisa zombini iSkyscanner kunye neRumbo okanye iDestinia, phakathi kwabanye. Zonke ziya kukuququzelela Amaxabiso aphezulu eenkampani eyaziwa kakhulu. Usezandleni ezilungileyo!.
Nje ukuba sikhethe, umsebenzi olula wokwazi uqala kufuneka sibhukishe nini. Njengokuba siceba ukuya eholideyini, asikwazi ukufika sikhwele. Hayi, kuba kufuneka silungelelanise ixabiso kancinci. Ukwenza oku, into ekufuneka uyazi kukuba, njengomgaqo oqhelekileyo, malunga neeveki ezisixhenxe ngaphambi kokuba ixabiso letikiti libe malunga ne-10% ngexabiso eliphantsi. Ewe kunjalo, ukuba singxamile kakhulu, kuya kufuneka uyazi ukuba itikiti kwangolo suku lokuhamba kusenokwenzeka ukuba lonyukile ngexabiso ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-30 ngaphezulu.
Nje ukuba uthathe amanyathelo aphambili okukhangela, ukukhetha kunye nokukhetha indawo ekuyiwa kuyo. Ngoku kuhlala kusenziwa ugcino ngokwalo. Nje ukuba ugqibile, baya kuthumela i-imeyile yokuqinisekisa kwi-imeyile osinike yona. Inombolo yetikiti lakho kunye nekhowudi yokubhukisha iya kuvela apho.
Zeziphi izibonelelo zokubhukisha inqwelomoya kwi-Intanethi?
Siyazi ukuba baninzi izibonelelo zokuba ukwazi ukubhukisha inqwelomoya kwi-Intanethi. Ngaphandle kwamathandabuzo, intuthuzelo yinto eya kuhlala ihamba nathi. Ayifani into yokuba uye kwiarhente kwaye uchithe intsasa yonke apho kunokuhlala kakuhle esofeni ekhaya. Ewe kunjalo, ukongeza koko, sinabanye ekufuneka bekhankanyiwe.
Ulwazi: Ewe, ulwazi lubanzi ngakumbi. Kungenxa yokuba enkosi kwiinjini zokukhangela oya kuba nakho thelekisa neenkampani ezahlukeneyo, kunye nokonwabela iindawo zokufikela kunye nayo yonke into ekufuneka uyazi.
Akukho shedyuli: Ungakhathazeki ukuba uchitha imini yonke usebenza kwaye xa ufika, i arhente yokuhamba ivaliwe. Phefumla, phumla kancinci, kwaye uvule ikhompyuter. Apho uyakufumana yonke into oyifunayo. Ungayikopa okanye uyiqwalasele ngosuku olulandelayo ukuba ufuna ukuyijonga ngokutsha.
Amanani: Njengokuba besiphawula, into ehlala isikhathaza ngamaxabiso. Kule meko, abayi kubakho abalamli kwaye sinokuhlala sihlangana nabo ngaphezu kokunikezelwa okunenzuzo. Ewe kunjalo, khumbula ukuba uhlala uqinisekisa ngexabiso lokugqibela, nje ukuba zonke iifizi ezihambelanayo zongezwa. Nangona kunjalo, ngokuqinisekileyo iya kuba ngexabiso eliphantsi kwi-Intanethi.
Ukuba ufuna hamba uye eLondonKe kuya kufuneka uyazi ukuba ukufumana iinqwelomoya, kuya kufuneka wenze ukubhukisha malunga neeveki ezisixhenxe ngaphambi kohambo. Ngale nto, ungagcina malunga ne-20% yexabiso. Ewe kunjalo, koku, sihlala sicebisa ukuba uqale ujonge ngokukhawuleza kwaye ngaphezulu kwako konke, ukuba uthelekisa. Olona hambo luphantsi lwexabiso eliphantsi ngoMeyi nangoSeptemba.
Ukuba ukhethe ukuthandana, mhlawumbi IParis ibe yeyona ndawo ungayi kuyo. Indawo ekuyiwa kuyo apho unokufumana iindawo ezinomtsalane. Ukuze uhlale ubakhumbula hayi, kuba yayiyindiza ebiza kakhulu, emva koko ungaqala ukubhukisha malunga neeveki ezili-10 ngaphambi kohambo lwakho. Ezona nyanga zibalaseleyo zokujonga iParis ziinyanga zikaSeptemba nango-Okthobha.
Iinqwelomoya ezitshiphu ziya eRoma
Ukuba ufuna Ndwendwela iRomaKuya kufuneka ubhukishe itikiti lakho lenqwelomoya kwinyanga enesiqingatha kwangaphambili. Ngale ndlela uya kufumana amaxabiso afikelelekayo. Kwakhona, khumbula ukuba uMeyi noJuni ziinyanga ezigqibeleleyo, kunye nemfuno ephantsi.
Uqoqosho lweenqwelomoya ukuya eMadrid
Fumana ukubalekela eMadrid yinto eqhelekileyo kwaye elula. Zonke izikhululo zeenqwelo moya zidityaniswe kuyo. Ke, ngokuqinisekileyo uya kuba nakho ukufumanisa uninzi kwaye ngamaxesha ahluke kakhulu. Kungcono ukuhlala kude neeyure eziphambili kunye neentsuku ezinje ngolwesiHlanu okanye uMvulo kuba amaxabiso aqinisekile ukonyuka.
La I-Barcelona idityaniswe kakuhle kakhulu. Zombini zineenqwelomoya zesizwe nezamazwe aphesheya. Ke ukuhamba kuyo akuyongxaki. Ngamanye amaxesha uyakufumana uhambo kunye nokuma kwabo, kodwa kuhlala kulungile ukuthatha ithuba ubone ukuba asizukugcina i-euro ezimbalwa. Khetha ixesha apho kuncinci ukungena kwaye uza kubona ukuba litshiphu kangakanani kunokuba ucinga.